Fiarovana ny tontolo iainana Lasan’ny tetikasa « Crédit Carat » ny 20 tapitrisa Ar
Jean Jacques Ratsietison “Sandam-bola nidina no nampianjera fitondrana teto”
Sandam-bola foana, hoy ny mpahay toekarena, Jean Jacques Ratsietison, no nahatonga krizy teto raha averina ny tantara.
Vinavinan’ny FMI Miiba ny fitomboana ara-toekaren’i Madagasikara
“Mampanahy ihany ny hoavin’ny toekarena sy ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mety ho sarotra rahateo ny fanarenana ny toekarena aty amin’ny tapan’Atsimon’i Afrika, ary voakasika manokana amin’izany ny eto Madagasikara” hoy Abebe Aemro Selassie,
Vehivavy mpitarika eto Afrika Hananganana ny tambazotra
Omaly dia tonga nitsidika ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena ny delegasiona avy amin’ny rafitry ny Firenena Mikambana izay notarihin’i Rtoa Charlotte Faty Ndiaye.
Sehatry ny harena an-kibon’ny tany Hahazo birao vaovao ny BAM Bongolava
Voapetraka ny faran` ny herinandro lasa teo ny vatofototry ny biraom-pitantanan-draharahan'ny harena an-kibon'ny tany na "Bureau d'Administration Minière" (BAM) any Tsiroanomandidy.
Lalampihariana Hazo Aleo ho lo toy izay ho an-kavana
Nohamafisina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 21 oktobra 2020 fa “zo atao ny mivarotra sy mampiasa ireo tahirin-kazo tsotra entina handaminana ny sehatra miasa amin’ny hazo tsotra.
Faritra Menabe Mampidi-bola betsaka ny fanondranana lamàtra
Miantraika any amin’ny varotra ivelan’i Madagasikara ny fisian’ny valanaretina Coronavirus. Anisan’ny voakasik’izany ny sehatry ny jono, satria tsy afaka miondrana ny hazandrano toy ny drakaka,
Fitrandrahana harena an-kibon` ny tany Misedra olana tao anaty folo taona
Fianakaviana 2 tapitrisa no mivelona amin`ny fitrandrahana harena an-kibon`ny tany eto Madagasikara.
Norombahin’ny « Crédit Carat », ilay tetikasa manolotra rafitra hahafahana manakalo ny tavoahangy plastika ho lasa « crédit carat » afaka hampiasaina toy ny vola na hisitrahana tolotra samy hafa toy ny fiofanana sy fijerena
sarimihetsika ilay fifaninana nokarakarain’ny orinasa Star momba ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika. Olona 14.064 no nifidy ny tetikasan’izy ireo ka nahazoany ny laharana voalohany raha 13.512 kosa ireo nankasitraka ny tetikasa Ando Compangy izay mpifaninana tamin’izy ireo. Omaly no navoaka tamim-pomba ôfisialy ny vokatry ny fifaninana. Samy faly ny roa tonta tamin’ny ankapobeny. Ho an’ny “Ando Compagny” dia fantatra fa mbola hitohy hanatsara ny tetikasany hatrany izy ireo ka amin’ny volana Janoary taona 2021 izy ireo no hisseho ho fantatry ny rehetra voalohany. Ho an’ny “Crédit Carat” kosa indray dia mbola hiatrika fiofanana mandritra ny iray volana sy tapany aloha izy ireo, fanomezana avy amin’ny Nexton ary aorian’izay dia hanatanteraka ny tetikasa amin’izany mba hisy vokany sy ho tsapain-tanana izany. Tsiahivina moa fa 20 tapitrisa Ar no loka natolotry ny orinasa Star ho an’ity tetikasa ity raha anisan’ny tanjona kosa ny hanafoanana mihitsy ny fiparitahan’ny tavoahangy plastika eto amintsika ho fiarovana ny tontolo iainana.